သူမ အမှားလုပ်မိလျှင် အမေက ‘abnormal’ လို့ မျက်နှာမဲ့ပြောပြီး ကဲ့ရဲ့တတ်ရဲ့။ အမေပြောသလိုပင် သူမက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တစ်ခုခုချို့ယွင်းနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လေသလား။ မနှစ်လိုသူများက ဆန်းဆန်းတင့်(sensitive)လို့ လှောင်ပြောင်တာကိုလည်း နာကျင်နေလျှက် မချေပနိုင်အာင်ပင်။ စကားလုံးတွေ ထိအရှမှာ ကြေကွဲမဆုံးတော့သလို ဥပေက္ခာစိတ်လည်း မထားနိုင်သူရယ်။ဘာကိုမှ အရေးမစိုက်ဟန်ရှိပေမယ့် တော်တော်အချစ်ခံချင်တဲ့ မိန်းမပါလားဆိုတာ အားလုံးရဲ့အမုန်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရမှ သဘောပေါက်တဲ့ မိန်းမလည်း ဖြစ်တယ်လေ။
ငယ်စဉ်က မိဘရဲ့စောင့်ရှောက်မှုမခံခဲ့ရသူများ၊ ချစ်မြတ်နိုးမှုမရခဲ့သူများက တခြားသူများရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာပေးမှုကို လိုချင်တဲ့အတွက် လူတွေရဲ့ သဘောတူညီမှု၊ခွင့်ပြုချက်ကို အမြဲရှာဖွေနေသတဲ့။ သူမကလည်း မိခင်စောင့်ရှောက်ခြင်းကို မခံခဲ့ရဘဲ ကြီးပြင်းခဲ့သော၊ ဖခင်ဆိုတာ မမြင်ဖူးသေးသော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ ထိုသို့ယိမ်းယောင်တတ်သောအဖွဲ့ထဲပါမှာ ကြောက်ရွံ့ကာ မိုးခါးရည်မသောက်ဘဲ အားလုံးကို ကျောခိုင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာ သူမ မဟုတ်တော့သယောင်။
အများမျက်မုန်းမကျိုးအောင် လူတွေအပေါ် လိုက်လျောနေတတ်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုသတိထားစောင့်ကြပ်ရင်း မြေနိမ့်တဲ့ဘက်၊ မှန်ကန်မှုဆီက အမြဲရပ်မယ်လို့ နှလုံးသွင်းထားပေမယ့် ခံနိုင်ရည်နည်းနေဆဲ။ အမုန်းစူးပေမယ့်၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပေမယ့်၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းပေမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်ရာအတွက် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ လူသားများမှာ သူတို့ကို ပံ့ပိုးယုံကြည်အားပေးတဲ့ မိသားစုရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားစွမ်းအားကြောင့်လေလား။
ထိုသူတို့ကို အားကျရင်း၊ စွမ်းဆောင်ရင်းမှာပင် ကျရှုံးနေဆဲ။ ဘယ်သူမှ နားမလည် ကိုယ်ချင်းမစာနိုင်။ တစ်ယောက်တည်းအားမွေးရတာ ခက်ခဲပင်ပန်းလှတာ။ တကယ်တော့ သူမ လူလားမြောက်သင့်ပါပြီ။ မိသားစုချစ်ခြင်းကို မရပေမယ့် မိတ်ဆွေများရဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ သူမ အသက်ဆက်သင့်တယ် မဟုတ်လား။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ကိုလည်း နမူနာယူသင့်တာ။
ငယ်သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီး တစ်ယောက်က တရားဟောဆရာဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ သူ့သူငယ်ချင်းက အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံခဲ့တယ်။ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ သူ တရားဟောတဲ့ကျောင်းမှာ သူ့သူငယ်ချင်းကလည်း အလုပ်လုပ်ရင်း သူတရားဟောတိုင်း ယုံကြည်ချစ်ခင်သော မျက်လုံးများနဲ့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ သူက တရားဟောကောင်းသူဖြစ်ပြီး တရားပြဆိုင်ရာ ရာထူးကြီးအတွက် ရွေးချယ်ခံရပေမယ့် အစမ်းသပ်ခံနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ဟောပြောနိုင်စွမ်းကျသွားတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းကို ပရိသတ်ထဲမှာ မတွေ့ရဘူး။ သူ့သူငယ်ချင်းက နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားသလို သူလည်း တရားမဟောနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ကို ယုံကြည်ချစ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းစွမ်းအားကို သူမရတော့လို့တဲ့လေ။
သူမက ထိုတရားဟောဆရာထက်ပင် ကံနည်းသူများလား။ သူမက အမေ့သား (Mama’s Boy) မဟုတ်သလို အဖေ့သမီး (Daddy’s Girl)လည်း မဟုတ်ချေ။ မိခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မရရှိဖူးလို့ မယုံကြည်တဲ့သူဟာ ဘယ်သူ့ချစ်ခြင်းကိုမျှလည်း ယုံကြည်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ဘာကိုမှ မယုံကြည်ရဲသော အမျိုးအစားအဖြစ် သူမကို တံဆိပ်ကပ်ကြဦးမှာလား။
ဖန်သားပြင်လှောင်အိမ်နဲ့ သူမကိုယ်သူမ အကျဉ်းချကာကွယ်ထားတာမို့ ချစ်သူများနှင့် သူမဟာ မြင်သာမြင်ပြီး မကြင်နိုင်ကြ။ ထို့အတူ သူမရဲ့ နှလုံးသားမှာ နူးညံ့တယ်ထင်ရပေမယ့် အတွင်းပိုင်းမှာတော့ စပရိန်လိုအရာမျိုးနဲ့ တည်ဆောက်ထားရဲ့လေ။ မည်သည့်ချစ်ခြင်းကိုမျှ လက်မခံနိုင်ဘဲ တွန်းကန်လွှင့်ပစ်နိုင်သော အစွမ်းရှိတဲ့ နှလုံးသားသာ။
အလွန်တရာ ကံဆိုးစွာပဲ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကြားရုံနဲ့ ယုံကြည်ညွတ်နူးခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ခဲ့။ ယုံကြည်အောင်ပြောနိုင်သူကိုပင် ငါကောင်းလို့ ချစ်တာ။ ငါဆိုးတဲ့နေ့ သူတို့ငါ့ကို မုန်းပြီး ထားခဲ့မှာပဲလို့ နားလည်နေတဲ့ မိန်းမလည်း ဖြစ်ရဲ့။ ဒါပေမယ့် မချစ်တတ်လို့တော့ မဟုတ်ပါကွယ်။ ချစ်တယ်ဆိုရင်း ထွက်ပြေးနေရခြင်းမှာ အကြောင်းအရာတစ်စုံတရာကြောင့် သူမကို မုန်းသွားမှာ စိုးရိမ်ပူပန်လွန်းလို့ပါ။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်း အသင် ဖတ်ဖူးလေမလား။ ကျောင်းသားများက အပင်နှစ်ခုကို ခွဲပြီး တစ်ခုကို ချစ်တယ်လို့ပြော၊ အားပေးချီးမွန်းစကားပြောပြီး နောက်တစ်ပင်ကိုတော့ မုန်းစကားပြော၊ ကဲ့ရဲ့နှိမ့်ချကြသတဲ့။ သိပ်မကြာမီပဲ အားလုံးမျှော်လင့်သလို အချစ်ခံရတဲ့အပင်လေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ပြီး အမုန်းခံရတဲ့ အပင်လေးမှာ သေဆုံးသွားလေတာ။အချစ်လည်း မခံရသလို စဉ်ဆက်မပြတ်လည်း အမုန်းမခံရတဲ့ သူမကရော ဘယ်လိုသစ်ပင်လဲ။
Mom, am I an abnormal plant?
သူမက အသက်ရှင်နေပေမယ့် မဖွံ့ဖြိုးနိုင်တော့သော အပင်ဖြစ်မလား။ တောအုပ်ထဲမှာ ပေါက်ရောက်နေပေမယ့် အခြားသစ်ပင်များနှင့် နှီးနှောဆက်နွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အရိပ်လိုသစ်ပင်မျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်လိမ့်။ အရိပ်ကောင်းပြီး ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင်သော အပင်ကြီးများကဲ့သို့ ကမ္ဘာမြေကို အကျိုးပြုတဲ့အပင်များကို လေးစားပေမယ့်၊ ပင်ချင်းယှက်ပြီး ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီသော အပင်များကို အားကျပေမယ့် အရောမဝင်နိုင်သော အပင်မျိုးများလား။ သေချာတာက အကျိုးပေးညံ့ခဲ့လို့ အေးမြလှပအောင် ပြောင်းလဲခြင်းငှာမတတ်နိုင်သော ထုထည်မဲ့သစ်ပင်သာ ဖြစ်တော့တာ။ ။
ပန်းဆိုးတန်း အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဂျာနယ်။ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/23/2013 11:03:00 AM2comments:
ဂန္တဝင်ဝတ္ထုတွေဆိုတာ လူတွေက ဖတ်ဖူးရုံသာ ကြိုးစားကြပြီး နောက်တစ်ခေါက်လှန်မကြည့်ချင်တဲ့ စာအုပ်တွေလို့ သရော်စာရေးကြသလိုပဲ ရှည်လျားထွေပြားတဲ့ ဂန္တဝင်ဝတ္ထုတွေကို ဝေရာမန္တိဆိုကာ ဝေးရကရှောင်ကြဉ်သူမှာ ကျွန်မ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူတစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်သော ဂန္တဝင်ဝတ္ထုတွေကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းဖြစ်စဉ်အရ စာအုပ်ပုံထဲ ခေါင်းစိုက်ရင်း ဂျော့အိုဝဲလ် (George Orwell )ရဲ့ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံ (Animal Farm) စာအုပ်ပါးပါးလှပ်လှပ်ကို ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝတ္တုလတ်ဖြစ်တဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေဟာ တိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်လို့ ကလေးစာအုပ်လို့ပင် သတ်မှတ်လေ့ရှိပေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအကြောင်းအရာ မဟုတ်ခဲ့တာမို့ ဖတ်ပြီးနောက်မှာ မသက်မသာခံစားချက်နဲ့ ကျွန်မ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအစမှာ မြေကြီးရှင်မွေးမြူရေးခြံက တိရစ္ဆာန်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင် မစ်စတာဂျုန်းစ်(Mr Jones)ရဲ့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ လျစ်လျူရှုခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဆုတံဆိပ်ရ အစ်ကိုကြီးအရာဖြစ်တဲ့ တောဝက်ထီးက တိရစ္ဆာန်တွေကို တင်းကုတ်ကြီးထဲမှာ စုစည်းစေခဲ့ပါတယ်။ သူက လူတွေရဲ့ ဖိနှိပ်၊ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ တိရစ္ဆာန်အားလုံးဟာ အတူတကွနေရမယ်။ တိရစ္တာန်အားလုံးအလုပ်ကြိုးစားပြီး နိဗ္ဗာန်ကို တည်ဆောက်ရမယ်လို့ မိန့်ခွန်းပြောပြီးတော့ သူ့အိပ်မက်ကို စာသားများနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ ‘အင်္ဂလန်ရဲ့ တိရစ္ဆာန်ကြီးများ’သီချင်းကို သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
သူသေပြီး သုံးရက်အကြာ တစ်ခုသောညနက်မှာ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ အာဏာဖီဆန်ပြီး သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကို အပြီးအပြတ်ဖယ်ရှား တိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့က မြေကြီးရှင်မွေးမြူရေးခြံကို တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံလို့ အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီး အစ်ကိုကြီးရဲ့အိပ်မက်ကို စွမ်းဆောင်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ဝက်ပျိုသုံးကောင် စနိုးဘောလ်၊ နပိုလီယန်နဲ့ စကွိရယ်လာ ( Snowball, Napoleon and Squealer) တို့ကတိရစ္ဆာန်ဝါဒစနစ်ကို တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် နပိုလီယန်ဟာ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးဝက်ဖြစ်ကာ လုံးလုံးလျားလျားကို အကျင့်ပျက်တဲ့ အခွင့်အရေးရှာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံရဲ့ တော်လှန်ရေးသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာ အတွေးအမြင်ကအစ သွေးထွက်သံယိုပုန်ကုန်မှုအဆုံး ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲချိန်မှာလည်း သူဟာ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အရေးမထားဘဲ သူ့ကိုယ်ကျိုးတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေခဲ့သူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဆောင်ရွက်မှုက ခွေးသားပေါက်တစ်စုက လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ခဲ့ခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ခွေးတွေရဲ့အကျိုးအတွက် သင်ကြားပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ သူ့အကျိုးအတွက်သာ အသုံးချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးတွေဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ရယ်ပေါ့။
တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ပြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံကို လွတ်လပ်ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့တဲ့ စနိုးဘောလ်ဟာ နပိုလီယန်ရဲ့ ကောက်ကျစ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ဝက်ဖြစ်ပါတယ်။ စနိုးဘောလ်ဟာ ဥာဏ်ပညာရှိသလို သနားကြင်နာတတ်ပြီး အပြောအဟောကောင်းကာ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့ပေမယ့် နပိုလီယက်ထက်စာရင် စဉ်းလဲမှုနည်းသလို ပါးနပ်မှုလည်းလျော့ရဲခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှာ နပိုလီယန်ရဲ့ တစ်ဖက်လှည့်သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်း ခံလိုက်ရသူဖြစ်ပါတယ်။
စကွိရယ်လာဆိုတဲ့ ဝက်ကတော့ နပိုလီယန်ရဲ့လက်စွဲတော်ဖြစ်ကာ တိရစ္ဆာန်တွေအကြားမှာ အမှားဝါဒဖြန့်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ စကွိယ်ရယ်လာဟာ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေပေါ် ဝက်တွေက လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို လိမ်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်တယ် ။ အာဏာပိုင်ဝက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အာဏာကိုထိန်းသိမ်းဖို့ တိရစ္တာန်ထုကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ဖို့ အကြောင်းပြချက်ဆင်ခြေတွေရယ်လေ။
အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားဖက်မှာဆိုရင် လှည်းဆွဲတဲ့မြင်း(boxer)နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူ့မှာ အံ့မခန်းစွမ်းအင်ရှိပြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ လေရဟတ်တည်ဆောက်မှုမှာ အဓိကနေရာက ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံအတွက် သူ့ဘဝကို စူးစိုက်နှစ်မြှပ်ထားတဲ့ သစ္စာရှိနောက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကူညီတတ်ပေမယ့် နုံ့နှေးတဲ့ဥာဏ်ရှိတဲ့သူဟာ ဘဝတူတိရစ္ဆာန်တွေကို အလေးထားပေမယ့် လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း နည်းပါးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အချိန်စွမ်းအားတွေကို ဒီတော်လှန်ရေး၊ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်ရေး၊ လေရဟတ်ဖန်တီးခြင်းမှာ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ‘ငါ ပိုပြီး အလုပ်ကြိုးစားမယ်။’ ‘I will work harder’ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နီတိကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ဝက်တွေအပေါ် အလွန်ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ထားပြီး နပိုလီယန်က အမြဲမှန်တယ်လို့ စိတ်သဘောထားသူလည်း ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ နပိုလီယန်က သူ့ကို သားသတ်ရုံထံ ရောင်းစားခံခဲ့ပြီး တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ သူဟာ ဆေးရုံမှာကောင်းစွာကုသခံရပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ စကွိရယ်လာက မဟုတ်သတင်းလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကို လိမ်လည်အုပ်ချုပ်သူဝက်တွေဟာ တော်လှန်ရေးကာလက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆောင်ပိုဒ်တွေကို တဖြည်းဖြည်းလိုရာဆွဲကာ မမှန်မကန်ပြောဆိုလာကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးမှာ ‘တိရစ္ဆာန်အားလုံးဟာ ညီမျှတယ်’ (all animals are equal.) ဆိုတဲ့ ဆောင်ပိုဒ်ကို ‘တိရစ္ဆာန်အားလုံးဟာ ညီမျှတယ် ။ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်အချို့ဟာ တခြားတိရစ္ဆာန်တွေထက် ပိုပြီး သာတူညီမျှ ဖြစ်တယ်’ (all animals are equal, but some animals are more equal than others.) လို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်ကတော့ ဝက်တွေဟာ လူတွေကို အတုခိုးပြုမူဆက်ဆံရုံသာမက တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံကိုလည်း မြေကြီးရှင်မွေးမြူရေးခြံဆိုတဲ့ အမည်ပြောင်းလဲပြီး လူတွေနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ကာ တိရစ္ဆာန်များကို နှိပ်ကွပ်လှည့်စားကာ စိုးမိုးနေပါတော့တယ်။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရင် စာအုပ်ဖတ်အပြီး နောက်ကြောင်းကို စုံစမ်းခဲ့ရာမှ စာအုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ရင်းဟာ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအကြောင်း၊ အာဏာရှင်ဂျိုးဆက်ဖ် စတာလင် (Joseph Stalin) ရဲ့အာဏာရမှုတို့ကို ပုံခိုင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်မ သိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံရဲ့ ပညာတတ်လူတန်းစားလိုပဲ ဝက်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းသစ်မှာ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်းများကိုလည်း လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စတာလင်ရဲ့ ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းသော စည်းမျဉ်းနဲ့ ရုရှတော်လှန်ရေးက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းများကို နောက်ဆုံးမှာ စွန့်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာ ဝက်တွေက အကြမ်းဖက်သော အစိုးရအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပုံနဲ့ ဝက်တွေရဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းထောက်လမ်းလျှောက်ပုံဟာ သူတို့မူလဆန့်ကျင်ခဲ့သော ဖိနှိပ်သူလူတွေရဲ့ အပြုအမူ၊စရိုက်တို့ကို အတုခိုးပုံတို့နှင့် ထပ်တူလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ရိုးဖြောင့်တော်သောဝက် စနိုးဘောလ်နဲ့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသောဝက် နပိုလီယန်ကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ Leon Trotsky နဲ့ စတာလင်တို့အကြား ပြိုင်ဆိုင်အာဏာလုမှုကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အစ်ကိုကြီးအရာက တောဝက်ထီးကို ကွန်မြူနစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဂျာမာန်လူမျိုး ကားမာ့စ်(Karl Marx)နဲ့ ရုရှတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် လီနင်(Lenin) တို့ကို ပေါင်းစပ်ပုံခိုင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွတ်လပ်လာတဲ့ မြေကြီးရှင်မွေးမြူရေးခြံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကို သင်္ကေတပြုသရုပ်ဖော်ထားတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ကျွန်မ ဖတ်စဉ်အခါမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို မြင်ယောင်နေခဲ့မိပါတယ်။
ဒီတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံဟာ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုစနစ်လိုမျိုး ဖွဲ့စည်းထားပြီး အစိုးရ နှင့် လှည့်ဖျားထားတဲ့သတင်းများ (ဝက်များ) ၊ ရဲ(သို့)စစ်တပ်လက်နက်ကိုင်များ (ခွေးများ) နဲ့ အလုပ်လုပ်သူ အခြေခံလူတန်းစားပြည်သူများ (တခြားတိရစ္ဆာန်များ) ပါဝင်ကြတယ် မဟုတ်ပါလား။လူမှုအဖွဲ့အစည်းအားလုံး (အရင်းရှင်စနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၊ ဖက်ဆစ်စနစ်၊ ကွန်မြူနစ်စနစ်) ကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ကျွန်မက မြန်မာပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင်မိတာ အမှားမရှိဘူးထင်ရဲ့။
ကိုလိုနီကျွန်ပြုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတရားအုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရသော တိရစ္ဆာန်ခြံ၊ အစ်ကိုကြီးအရာက လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပုံဟာ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ တော်လှန်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပုံက တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အောင်ပွဲ၊ မတရားလုပ်ကြံခံလိုက်ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စနိုးဘောလ်၊ စစ်တပ်ရဲ့ အကြီးအကဲတွေက လက်ဆင့်ကမ်းအာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်က ဝက်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မျိုး၊ နောက်ဆုံးတော့ တော်လှန်ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းကာ အခွင့်ထူးခံရင်း ပြည်သူတွေကို လှည့်ဖျားအုပ်ချုပ်ပုံတွေ…၊ ရိုးလွန်းတော့လည်း ဆန်းနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် လောကဓမ္မတာအကြောင်းအရာတွေဟာ မှန်လွန်းလို့လည်း ထိရှစေပါတယ်။
စာရေးဆရာတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမှန်ကန်ဆုံးရှေ့ဖြစ်ဟောဆရာတွေ ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့။ ဒါပေမယ့် ‘တိရစ္ဆာန်အားလုံးဟာ ညီမျှတယ် ။ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်အချို့ဟာ တခြားတိရစ္ဆာန်တွေထက် ပိုပြီး သာတူညီမျှ ဖြစ်တယ်’ (all animals are equal, but some animals are more equal than others.) ဆိုတဲ့ ဆောင်ပိုဒ်ဟာ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ရယ်စရာဖြစ်သလို သရော်စရာကောင်းပေမယ့် ခံစားရသူတွေတော့ မရယ်မောနိုင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ညီမျှမှုကို မရရှိဖူးတဲ့သူအတွက် ဟာသ မဟုတ်ပါဘူး။
တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းထဲက စာသားက တကယ်မှန်ရဲ့လား။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူတွေထက် ပိုညီမျှသလဲလို့ ကျွန်မဆက်တွေးနေမိပါတယ်။ သေချာတာက ဒီစာအုပ်ကို နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ဖို့ ကျွန်မ သတ္တိမွေးရတော့မှာပါ။ ဘာအချက်တွေ တိုက်ဆိုင်နေဦးမှာလဲလို့ မစူးစမ်းချင်တော့ပါဘူး။ ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/17/2013 01:00:00 AM No comments:
ငတ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး ဖွားမြင်ခဲ့သူတစ်ချို့ကတော့ စာနာနိုင်မှာ မဟုတ်ပေ။ ဘိုးဘွားအိမ်မှာ ကြီးပြင်းရသောကျွန်မကတော့ သိတတ်စအရွယ်တည်းက ဒီအဓိပ္ပါယ်ကို သိနားလည်ခံစားခဲ့ပါတယ်။ ‘ဒီလောက်ကျွေးထားတာပဲ ဘာငတ်တာလဲ’ လို့ အဘွားကဆူရင် ‘စားချင်တာ မစားရတာကလည်း ငတ်တာ။’ လို့ ပြန်ပြောခဲ့ဖူးသူပါ။ဒါပေမယ့် လူလားမြောက်ပြီး အလုပ်အကိုင်ရလို့ စားချင်တာကို စားနိုင်ပြီလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်။
အချိုအစိမ့်ကြိုက်သူဖြစ်ပြီး ဝမှာ စိုးကြောက်ကာ ဟိုဟာ မစားချင်၊ ဒီဟာ ရှောင်ရနဲ့ ငတ်ပြန်လေတာ။ စားချင်တိုင်းစားပေမယ့် သွယ်လျလှပနေတဲ့ အစ်မကို အားကျရင်း အရင်ဘဝက ငါတော်တော်ပဲ သူများအစားအသောက်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့လေသလားလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်း အငတ်ခံနေရဆဲ။
မြန်မာပြည်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဝလိုလျှင် ဝ စေတော့။ စားလို့ရတာ စားမယ်။ ဘာမှ မရှောင်တော့။လို့ စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချထားခဲ့ပေမယ့် ကံဆိုးလှစွာပဲ ဟင်းချက်ကျွေးသူညီမငယ်မှာ ချွေတာမှုမှာ တုနှိုင်းမမှီသော မိန်းကလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ညီမငယ်က ဈေးသွားသော တစ်ရက်မှာသာ ကောင်းမွန်ရာ ချက်ကျွေးပြီး နောက်ရက်များမှာ တိုက်အောက်ကိုပင်မဆင်းဘဲ အဆင်ပြေသလို စီမံပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင်တော့ ကြက်ဥကြော်ကျွေးခြင်း၊ ပဲပြုတ်ကြော်ကျွေးခြင်း၊ ခေါက်ဆွဲကြော်ကျွေးခြင်းအမှုတို့ကိုပြုရင်း ဝယ်ခြမ်းသမျှကို စာရင်းမှတ်ကာ ပိုက်ဆံကုန်လို့ မဖြစ်ဘူး။ အသုံးကြမ်းရင် အဒေါ်ဆူလိမ့်မယ်လို့လည်း ရေရွတ်ပြန်ရဲ့။
ကျွန်မမှာ ညီမငယ်ကိုတော့ ဘာမှမပြောရဲဘဲ အစ်မက ဖုန်းဆက်ရင် ဒီနေ့ ဘာနဲ့စားလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ထိုသို့ချက်ကျွေးကြောင်း တိုင်ပြောပေမယ့် အစ်မရော ညီမငယ်ပါ ကျွန်မပြောသမျှကို အရေးမထားဘဲ ရက်ရက်စက်စက် ရယ်မောကြလေတာ။ အစ်မဖြစ်သူက ကိုယ့်ဘက်မပါဘဲ 'ချက်ကျွေးတာကို ဂျီးမများဘဲ စားပေါ့။ မစားနိုင်ရင် ဆိုင်က ဝယ်စား' လို့ သြဘာပေးလေတော့ ... ဟင်း ... ခက်တယ်။ ကျွန်မကလည်း အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ချင်သူမို့ ညီမငယ်ရဲ့ အရိပ်အခြည်ကိုသာကြည့်ပြီး စားသောက်ရလေပြီ။
တစ်ခါ နေ့လည်စာကို ဘဲဥတစ်ခြမ်းလို့ ပြောရာ ‘what?’ လို့ ကျွန်မ အော်ပေမယ့် ညီမငယ်က မမှုဟန်နဲ့ ‘ဒါပဲ စားရမယ် အစ်မ ဟီးဟီး’ လို့ ရယ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်လေတာ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါဘိ။ အစာရေစာမဝလင်သောကျွန်မက လမ်းလျှောက်ရောင်းတဲ့ မုန့်ပဲသရေစာတွေကို ဝယ်စားနေတာ အလိုတူကြည်ဖြူပေမယ့် ပဲကတ္တီပါပြုတ်ကို ဒီအတိုင်းစားလျှင်တော့ ခွင့်မလွှတ်ချေ။ ‘မစားနဲ့ အစ်မ၊ အသုတ်သုတ်ပြီး ထမင်းနဲ့စားရမယ်။’လို့ မျက်နှာတည်နဲ့ ပြောပြီး သိမ်းသွားပြန်ရဲ့။
ဝမ်းနည်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရ။ နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာ ဖြစ်တည်။ ငါဟာ လူယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ပြိတ္တာလားလို့ပင် တွေးမိလေပြီ။ အဒေါ်ငယ်ကို ထိုအကြောင်းပြောလျှင် သူတို့အမေက အဲဒီလိုသင်ထားတာ။ သူတို့တစ်အိမ်သားလုံး သိပ်စနစ်ကျတာပဲလို့ ဆင်ခြင်ပေးပြန်တာ။ အဖြေကို သိပ်မကျေနပ်ပေမယ့် ညီမငယ်လည်း မကြာခင်ပြန်တော့မယ်ဖြစ်ရာ စောဒကမတက်လိုတော့။
စနစ်ကျခြင်း၊ ခြိုးခြံချွေတာခြင်း၊ အငတ်ထားခြင်းမှာ ပါးလျတဲ့ ပုဝါစမျှ ကာရံထားတဲ့ အခန်းကန့်များ ဖြစ်နေလိမ့်မလား။ ညီမငယ်တို့ (ကျွန်မတို့) တစ်မိသားစုတည်းသာ ထိုသို့ကျင့်ကြံနေသလား။ သမ္မာအာဇီဝနဲ့ ရှာဖွေစားသောက်တဲ့ တခြားမိသားစုတွေကရော။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၁၅% ဖြစ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲနိုင်ငံများရဲ့ ၉၈% လူတွေဟာ အာဟာရမပြည့်ဝကြဆိုတဲ့ အချက်ကို ဖတ်ဖူးလေတာ။ ထိုရာခိုင်းနှုန်း လူဦးရေထဲမှာ အခုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်နေပြီလား။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ ကလေးငယ်၁၅သန်းဟာ အစာရေစာမလောက်ငမှုကြောင့် သေဆုံးရပါသတဲ့။ မြန်မာပြည်မှာရော ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှလဲ။
‘ဗိုက်ဆာလို့ ထမင်းကျန်၊ ဟင်းကျန်လေးများရှိရင် စွန့်ကျဲကြပါ’ ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့အသံ ကြားရလို့ မရမ်းသီးထုတ်အသစ် ပစ်ချအလှူလှုခံထည့်ရင်း သူတို့အတွက်ရော ကိုယ်အတွက်ပါ ဖြေမဆည်နိုင်ချင်။ ငတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို မပြောရ၊ မကြားရတဲ့ အလိုရှိတိုင်း လျှူနိုင်မယ့်သူ ဘယ်အချိန်မှ ဖြစ်ရပါ့မလဲလေ။ ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/15/2013 01:02:00 AM 8 comments:
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/12/2013 03:29:00 PM2comments:
ညီမငယ်က ကိုရီးယားကားကြည့်ရင်း ‘သမီးတို့က ဘာလို့ ရုပ်ဆိုးရတာလဲ’ လို့ မေးလေ၏။ တို့…လို့ဆိုသောကြောင့် ကျွန်မကိုပါ ရည်ညွှန်းဟန်ပဲဟု အလိုအလျှောက် သဘောပေါက်ရသည်။ ကြားရတာ နားမချမ်းသာပေမယ့် ရင်နာနာနဲ့ပဲ ရှင်းပြရသေးတာပ။
‘မလိက္ကာမိဖုရားကြီးကလည်း ဘုရားကို ဒီလိုမေးလျှောက်ဖူးတယ်။ဘုရားက ရုပ်အဆင်းမလှတာ အရင်ဘဝက ဒေါသအားကြီးလို့ လို့မိန့်တယ်’ ညီမငယ်က အဖြေရဟန်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပေမယ့် အပြည့်အစုံနားလည်စေချင်သေးတော့ ခက်လှသည်။ ‘ဒေါသမှာ နှစ်မျိုးရှိတယ် သိလား။’ ဟု မေးလိုက်တဲ့အခါ ညီမငယ်က မသိဘူးလို့ ဆိုသည်။
ငုံ့နေတဲ့ဒေါသနဲ့ ဖွင့်ထွက်တဲ့ဒေါသလို့ ရှိတယ်တဲ့။ စိုးရိမ်သောကကြီးတာ။ စိတ်ညစ်တာ၊စိတ်ပျက်တာ၊စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ အလိုမကျတာ၊အငြိူးထားတာတွေက အငုံ့ဒေါသတွေ၊ စိတ်တိုတာ၊ဒေါသထွက်တာ၊ဆူပူတာ၊ရန်လုပ်တာ၊ဂလဲ့စားချေတာ၊ နောက်ဆုံး ကိုယ်ထိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေက အပွင့်ဒေါသလို့ ဖြေရင်း စိတ်ကြည်မှ ရုပ်ကြည်တယ် လို့ လူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီသဘောလိုပဲ စိတ်ဆိုးတော့ ရုပ်ဆိုး၊ ဒီဘဝမှာ စိတ်မကြည်လင်တဲ့အကြောင်းကြောင့် နောက်ဘဝအထိ ရုပ်အဆင်းထိခိုက်တာလို့ အကျယ်ချဲ့ဖြေမိလေသည်။
ညီမငယ်က တစ်ခွန်းလေးမေးမိတာ တစ်မီးနစ်မျှ နားထောင်လိုက်ရသဖြင့် စိတ်လေသွားဟန်နဲ့ ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြောပြီး ကိုရီးယားကားဆက်ကြည့်နေရာ အင်း နောက်ဆို မေးသလောက်ပဲဖြေမှလို့ အသိတရားရလေသည်။ စာအုပ်ထဲ မျက်နှာလွှဲပြန်လွှဲလိုက်ပေမယ့် စာထဲမှာ စိတ်မရောက်ဘဲ ပျော်ရွှင်မှုကို ကြာရှည်မသိုလှောင်နိုင်တဲ့ကျွန်မ နောက်ဘဝမှာ အလွန့်အလွန်အကျည်းတန်နေမလားဟု သောကပွားမိလည်း စိတ်ညစ်နေသလားလို့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မမေးဝံ့အောင်ပင်။
တစ်နေရာမှာ မပျော်ဘူးဆိုပြီး နေပျော်မယ်ထင်ရာဆီ ပြန်လာခဲ့သည်။ စာဖတ်၊စာရေးနေရလျှင် လူဆင်းရဲလည်း စိတ်ချမ်းသာမည် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ တစ်လကျော်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ရည်ရွယ်ထားတဲ့စာက တစ်မျက်နှာပင် မရှိသေး။ ခက်ပြီ။ စာမရေးနိုင်ပြီမို့ ပိုလို့စိတ်မချမ်းမြေ့အောင်ရှိလေသည်။ စားလိုက်၊အိပ်လိုက်၊စာဖတ်လိုက် လုပ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပေမယ့် ရင်ထဲက တွန်းအားမီးက ဖျော့နေရာမှ ချုပ်ငြိမ်းသွားဟန်ရှိသည်။ ဒီမီးကို ဘယ်လိုပြန်မွှေးရမလဲ။ တစ်နေရာကို ထွက်သွားချင်ပြန်ပေမယ့် ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ။ ကျွန်မနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာဟာ ဘယ်အရာလဲ။ ဘာလုပ်ရမည် မသိ။
အနားမှာ ဆေးလိပ်ဗူးသာရှိပြီး ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဆိုရင် တလိပ်နဲ့တလိပ်မီးကူးပြီး သောက်မိနေမည်ထင်သည်။ အခုတော့ မီးခိုးငွေ့အစား သက်ပြင်းငွေ့ကိုသာ မှုတ်ထုတ်နေမိသည်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး မှိုင်နေသူဟာ ငါ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုရင်းပင် စိတ်ပျက်စိတ်က အစပျိုးလာလေပြီ။ ကောင်းပါလေ့။ ဒီဘဝလည်း ရုပ်အကြည်ပျက်သလို နောက်ဘဝမှာလည်း အကျည်းတန်နေလိမ့်။ ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/08/2013 03:27:00 PM5comments:
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/02/2013 12:05:00 PM2comments: